Tilmaamaha Iibsiga ee 2021 ee tubada Musqusha
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Sida loo doorto Qasabada Musqusha: Tilmaamaha Iibsiga ee 2021
2021 / 01 / 28 QoondayntaTilmaamaha qasabada 504 0
Doorashada qasabadda musqusha ee saxankaaga ayaa u ekaan kara go'aan fudud illaa aad ka bilowdo inaad aragto inta ikhtiyaar ee la heli karo. Waxaa jira qaabab kala duwan, midabbo iyo dhammayn, qaabab wax lagu maareeyo, cabbirro, iyo inbadan. Sidee ku ogaan kartaa irbadda ku jirta cawska ee ku habboon musqushaada?
Waxay kaa caawinaysaa inaad ku bilowdo fahamka mid kasta oo ka mid ah xulashooyinkaaga iyo sidoo kale faa'iidadooda, qasaarooyinka, iyo xaddidaadaha. Qaarkood ma noqon karaan ikhtiyaar musqushaada gabi ahaanba. Aynu kala qaadno farqiga u dhexeeya noocyada kala duwan ee qasabadaha musqusha si loo go'aamiyo kuwa ku habboon baahiyahaaga.
Fahamka Fursadaha Rakibaadda
Khasnadaha badankood iyo miisaska musqulaha waxay la yimaadaan godad horay loo qoday oo qasabadaha ah. Waxaad ogaan kartaa in waxyaalaha waxtarka leh qaarkood ay hal god ku leeyihiin saxanka gadaashiisa halka kuwa kalena ay leeyihiin saddex. Kuwa leh saddex dalool ayaa leh meelo kala duwan oo godadka u dhexeeya.
Eeg wax aan waxba tarayn ama miiska dushiisa si aad u aragto waxa ku habboon qaabeynta daloolka aad haysato, maxaa yeelay tani waxay xaddidi doontaa xulashadaada qasabadaha. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay hal dalool oo keliya, ma awoodi doontid inaad adeegsato rakibo qasabad saddex-god ah illaa aad ka dhigto qaabab dheeri ah.
Inta godadka ka sokow, fiiri sida godadka loo dhigay. Haddii aad leedahay saddex god, cabir masaafada u dhexeysa labada godod ee ugu fog labada dhinac. Qasabado kala duwan ayaa loo sameeyaa qaabab kala duwan oo dalool ah.
Iyada oo cabiraadahan iyo xadeynta maskaxda lagu hayo, horay ayaad usocon kartaa adoo garanaya nooca rakibida rakibidu ay tahay mana aha ikhtiyaar kuu ah adiga markaan sahamino noocyada rakibida.
Noocyada Rakibaadda Qasabadda
Inta udhaxeysa tuubada iyo gacmaha, waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo set biyood loo dhigi karo. Kuwani waa qaybaha guud ee aad ka heli doonto.
Musqusha Qolka Musqusha ee Xarumaha Xarumaha Musqusha
Tuubada xarunta wax lagu duubo waxay leedahay qasabad iyo laba gacan qabasho, laakiin dhammaantood waxaa lagu rakibay hal saldhig. Kuwani waxay si gaar ah ugu badan yihiin wax-qabadka yaryar maxaa yeelay waa is-dulsaar. Qalabka qasabada ayaa u baahan doona rakibo saddex-god ah, in badan oo ka mid ahna waxay ku yimaadaan cabbirro saldhigyo kala duwan ah, sidaa darteed waxaad u baahan doontaa inaad doorato midka ku habboon masaafada u dhexeysa godadkaaga waxtarka leh
Chrome Qasabadaha-Hal-godka Musqulaha Musqusha
Run ahaan magaceeda, tuubada hal-god kaliya ayaa ka kooban hal xabbo: qasabada. Kuwaani badankood waxay yeelan doonaan gacan ku haynta tuubada, badiyaa waxa saaran tuubada.
Inta badan qasabadaha hal-daloola waa gaagaaban yihiin, laakiin sidoo kale waxaa jira qasabado maraakiib, kuwaas oo loogu talagalay weelasha weelka sidaa darteed way ka dheer yihiin qasabadaha dhaqameed. Iyadoo aan loo eegin, haddii aad leedahay rakibid dalool keliya, kuwani waa noocyada qasabadaha aad u baahan doonto.
Nickel Nadiifiya Qasabadaha Balaadhin ee Musqusha
Tuunbo baahsan waxay leedahay saddex qaybood oo kala duwan: qasabada iyo laba wax gacanta. Si ka duwan qasabadaha xarumaha, tubooyinka baahsan ma laha saldhig; seddexdan qaybood ayaa si gooni ah loogu rakibay wax aan waxba tarayn ama meel iska soo horjeed ah oo dhexdooda ah.
Qasabadahaani waa xulasho kaliya haddii aad leedahay qaab-dhismeed saddex-god ah oo baahsan oo ku saabsan faan-xumadaada. Nasiib wanaagse, in kastoo, sababta oo ah seddexdan qaybood ay kala duwan yihiin, looma baahna in la doorto qasabad u dhiganta ballaca saxda ah ee qaabkaaga: tixgelin muhiim u ah qasabadaha xarunta la dhigay.
Wall Mount Musqusha Qasabada Chrome
Tuubbooyinka darbiga ku dheggan ayaa ah isbeddel sii kordhaya, gaar ahaan musqulaha raaxada leh. Run ahaan magacooda, qasabadahaan waxaa lagu dhejiyaa gidaarka ama dhabarka dambe ee saxankaaga halkii ay ka ahaan lahaayeen wax aan waxba tarayn lafteeda. Tani waxay sii deyneysaa meel badan oo ka mid ah miiska dushiisa, in kasta oo ay u egtahay in lagu daro qiimaha musqushaada maxaa yeelay waxay badanaa u baahan tahay tuubiste inuu dhaqaajiyo tuubooyinka qaar si uu u gaaro barta rakibidda.
Waxyaabaha Saameeya Nooca Rakibaadda Qasabadda
Sidee ku ogaaneysaa noocyadan rakibidda tuubbada ee ikhtiyaarrada kuu ah adiga? Tixgeli qodobadan.
Godadka Rakibaadda Hadda
Ku noqo godadkii horay loo qoday ee ku yaallay wax aan jirin ama dusha sare. Cusbooneysiinta qiimaha-wax ku oolka ah ee musqusha, dooro qasabad loo sameeyay nooca qaabeynta miisaska miiskaaga uu leeyahay.
Waxaad haysataa ikhtiyaar aad ku qoddo godad dheeri ah, laakiin tani way qaali noqon kartaa. Maskaxda ku hay inaad dooran karto hal-dalool oo qudha haddii aad saddex god ku dhex haysato wax aan jirin, laakiin raadi qasabad leh hab ay ku daboosho godadka aan la isticmaalin.
Waxaad dooneysaa in qasabadaada ay u dhigantaa cabirka wax yaridaada ama miiskaaga. Guud ahaan, wax-yarooyinka yaryar ayaa sifiican uga shaqeeya hal-dalool, xarunta dhexdeeda, ama qasabadaha gidaarka lagu dhejiyo. Qasabadaha fidsan ayaa aad ugu dheellitiran waxyaalaha waawayn ee foosha xun iyo miisaska dusha laga saaro.
Inta badan qasabadaha waxaa loogu talagalay dhaqannada, saxamada qubeyska ee go'an. Si kastaba ha noqotee, weelasha weelka ayaa caan ku noqonaya. Haddii aad leedahay ama aad qorsheyneyso inaad haysato weel saxan, dooro qasabad weel ama tuubbo derbiga ku dhegsan oo aad u sarreysa oo qaadi kara saxankaaga.
Fursadaha Xakamaynta Qasabadda iyo Xakamaynta Biyaha
Farqiga kale ee aad ku dhex arki doontid qasabadaha waa habka ay u maareeyaan xakamaynta biyaha, sida tirada gacmaha ay isticmaalaan iyo sida ay u dhaqaaqaan meelaha ay ka hawl galaan. Kuwani waa qaybaha ugu macquulsan ee aad heli doonto.
Qasabadaha Musqusha Kali ah ee Gacanta Lagu Qabto Nickel
Qasabadaha hal-qabadka leh waxay leeyihiin hal gacan oo xakameysa socodka biyaha iyo heerkulka biyaha labadaba. Gacan-ku-haynta ayaa caadi ahaan u leexda bidix iyo midig si loo xakameeyo heerkulka iyada oo waliba loo rogo hoos iyo hoos si loo xakameeyo socodka biyaha.
Noocyada noocan ah ee gacma-qabsiga ah ayaa caan ku ah qasabadaha hal-godka ah iyo sidoo kale qasabadaha maraakiibta iyo tubooyinka gidaarrada ku dheggan. Dad badan waxay u arkaan inay ka fududahay inay maareeyaan inta ay leeyihiin gacmo gooni ah oo loogu talagalay biyo kulul iyo qabow maxaa yeelay way adkaan kartaa in la helo isku dheelitirnaan sax ah oo u dhaxeysa labada.
Laba-Gacmeed Qasabadaha Saliidda Nadiifsan Maarta Nadiifta Fiditaanka Musqusha
Xarumaha iyo qasabadaha baahsan, ka filo qasabadahaaga inay yeeshaan laba gacan oo kala duwan. Mid baa xakameynaya socodka biyaha qabow halka kan kale uu xakameynayo socodka biyaha kulul. Si ka duwan hal-tuubbo hal-qabsi ah, gacma-qabadyadan ayaa hal dhinac kaliya u rogaa: bidix iyo midig ama kor iyo hoosba.
Qasabadaha Dhaqdhaqaaqa Taabanaya
Qasabad taabasho ku shaqeysata waa qasabad daaran oo taabata dusha qasabadda. Si kale haddii loo dhigo, uma baahnid inaad leexsatid gacan qabsi gaar ah. Tubbada gacanta, gacanta, ama xusulka oo keliya ayaa dhaqaajineysa qasabadda.
Tuubbooyinkaani waxay si gaar ah waxtar ugu leeyihiin ujeeddooyinka nadaafadda. Haddii gacmahaagu wasakh yihiin, tusaale ahaan, waxaad suxulka ku furan kartaa suxulka halkii aad gacmaha wasakhda ah ku taaban lahayd taabta.
Xakamaynta heerkulka ayaa ku kala duwan noocyadan qasabadaha. Qaarkood waxay leeyihiin heer-kul hore loo sii dejiyey, sidaa darteed biyuhu had iyo jeer waxay ka soo baxaan heerkul isku mid ah. Qaar kale waxay leeyihiin hal ama laba gacan qabsi oo aad u isticmaali karto si aad u xakameyso heerkulka, markaa waad daari kartaa biyaha oo waxaad siin kartaa gacmahaaga biyo raacis bilow ah ka hor intaadan heerkulka hagaajin.
Run ahaan magacooda, qasabadaha aan taabashada lahayn uma baahna haba yaraatee wax xiriir ah. Waxay leeyihiin dareemayaal ogaada markay gacmahaagu u soo dhowaadaan qasabadda, dareemayaashaasina waxay daaraan tuubada. Sida qaar ka mid ah qasabadaha taabashada ku shaqeeya, qasabadaha aan taabashada lahayn had iyo jeer waxay leeyihiin heer-kul hore loo sii dejiyey.
Waxyaabaha Saamaynta Ku Leh Gacantaada iyo Xakamaynta Biyaha
Sideed ku doorataa qalabka ugu fiican iyo habka xakamaynta biyaha musqushaada? Waxaa jira dhowr arrimood oo saameyn ku leh go'aankaaga.
Xirfadaha Dhaqdhaqaaqa Gacanta
Ma jiraa qof ka tirsan gurigaaga ama qof kasta oo gurigaaga ku soo booqda oo ay dhibaato ka haysato dhaqdhaqaaqiisa gacantu? Waxay yeelan karaan arthritis-ka, dhaawaca dareemaha, ama nooc kale oo jirro ama dhaawac ah. Hadday sidaas tahay, qasabad aan taabasho lahayn ama taabasho dhaqaajisay waxay u baahan tahay xoog gacan yar iyo isuduwid si markaa ay ugu fududaan doonto inay maareeyaan
Inta udhaxeysa hargabka, hargabka, iyo Cudurka faafa ee COVID-19, waxaa jira sababo badan oo loo raadiyo qaabab looga dhigo gurigaaga mid jeermis ka caansan. Tani waa run gaar ahaan haddii aad leedahay carruur, maadaama gacmahooda yar ay u muuqdaan inay raadinayaan jidkooda wasakh badan iyo walxo kale oo qas ah. Badbaadada iyo caafimaadka, qasabadaha aan taaban ama taabashada dhaqaajiya ayaa noqon doona sharadkaaga ugu fiican.
Nooca Rakibaadda Qasabadda
Ku noqo isku xidhkaaga rakibida tubbada qasabaddaada. Tirada godadka aad leedahay ayaa xaddidi kara xulashooyinkaaga noocyada gacmeedyada aad doorato. Haddii aad leedahay qaabeynta hal-dalool, waxay u badan tahay inaadan awoodin inaad doorato qasabad laba-qabad leh illaa aad ka dhigatid qaabab dheeri ah.
Noocyada Qalabka Fudud
Markaad dooranayso qasabaddaada, waxaa muhiim ah inaad tixgeliso qaabka gacmeedyada aad rabto sidoo kale, maahan oo keliya tirada gacmaha. Tixgeli xulashooyinkaan sare.
Qabashada qanjidhada guud ahaan waa gacmo wareegsan oo aad u weecato si aad u xakameyso socodka biyahaaga iyo heerkulka. Dadka qaarkiis ayaa doorbida iyaga maxaa yeelay waxay u muuqdaan inay ka jilicsan yihiin gacmaha lever. Waxaad ugu horreyntii ku arki doontaa burooyinka ku xirnaanta qaab-dhismeedka qasabadda laba-farood, in kastoo ay jiraan xoogaa qasabado hal-gacan-qabsi ah oo leh buro ku socota dhammaan dhinacyada.
Gacan-qabashada kabaalka ayaa ah nooca ugu caamsan ee lagu arko qasabadaha. Waxay u egtahay ul jiingad ah, in kasta oo gacan kasta uu leeyahay qaab u gaar ah iyo qallooc. Sida burooyinka, taabadani waxay caadi ahaan ka dhex muuqdaan qasabadaha laba-gacmeed waxayna u leexdaan bidix iyo midig oo keliya.
Markaad haysatid qasabad hal-gacmeed ah, xammuulkaasi caadi ahaan waa joystick handle. Kuwani waa gacmo dheereeya oo soo rogaya kor iyo hoos sidoo kale bidix iyo midig si ay u xakameeyaan labada heerkulka iyo socodka biyaha. Waxay caadi ahaan kuxiran yihiin qasabada lafteeda.
Waxyaabaha Saameeya Xulashadaada
Markaad tixgelinayso ikhtiyaarrada gacantaada ee tubbada cusub ee musqusha, maskaxda ku hay arrimahan.
Sida qaabeynta kala duwanaanta kaladuwan, noocyada gacmeedyada aad doorato waxay ku xirnaan karaan dhaqdhaqaaqa gacanta xubnaha qoyskaaga. Knobs, tusaale ahaan, waxay u baahan yihiin xajin sidaa darteed way ku adag tahay in loo isticmaalo dadka gacanta xoogoodu ku yar tahay ama ay gacanta ku hayaan. Joysticks iyo levers waa marin u helitaan badan.
Nooca isku xidhka qasabada ee aad dooratid wuxuu cidhiidhi gelinayaa xulashooyinkaaga wax qabashada. Tusaale ahaan, haddii aad u baahan tahay qasabad hal-gacan-qaad ah, kuwani waxay had iyo jeer lahaan doonaan xayndaab joystick ah.
Dhamee ikhtiyaarrada qasabada musqusha
Sida ugu badan ee qaabeynta iyo isticmaalka loo adeegsado qasabadaha musqusha, waxaad sidoo kale dooneysaa in tuubada ay si fiican ugu ekaato musqushaada. Taasi waa halka midabada iyo dhammaadka kaladuwan ay ka yimaadaan, markaa maskaxda ku hay fursadahaan.
Musqusha Xarumaha Musqusha Chrome
Chrome wuxuu ka mid yahay dhammeystirka ugu ballaaran ee la og yahay ee qasabadda musqusha iyo wixii ka dambeeya. Midabkeeda u eg qalinka iyo dhalaalka dhalaalaya sare ayaa ka dhigaya xulasho caan ah.
Qasnadda Musqusha ee Centerset oo ay weheliso Golaha Bullaacadda
Tuubbooyinka nikkelku waxay yeelan karaan midab u eg qalin ama u eg midab buluug ah, oo leh huruud hoostiisa. Labada nikkel ee la cadaystay, ee leh sheyga satinka, iyo nikkel la safeeyay, oo ah glossier, waxay ku badan yihiin musqulaha casriga ah iyo kuwa dhaqameed.
Naxaas Saliid-La Mariyay
Musqusha Qashin Biyoodka 4 Inch Xarunta Saliidda Nadiifsan
Iyada oo midabkeedu yahay bunni qoto dheer, midab madow ku dhowaad, naxaas saliid duubtay ayaa cirka isku shareertay sanadihii ugu dambeeyay. Waxay ku badan tahay musqulaha oo leh qaab dhaqameed ama mid casri ah, waxayna caadi ahaan leedahay sheet jilicsan oo jilicsan.
Naxaasku dhowr jeer ayuu isu beddelay oo ka baxay caannimada, laakiin maanta, waa ikhtiyaar u kordhaysa qasabadaha musqusha. Inta badan sida nikkel, waxaad ka heli doontaa labada naxaas la caday iyo qasabadaha naxaasta la safeeyey.
Markabka Maraakiibta Siigada Matte Black
Matte madow waa ikhtiyaar cusub oo qasabadaha ah waxayna noqoneysaa mid caan ah, gaar ahaan guryaha casriga ah. Qaabka aan dhalaalka lahayn waa mid geesinimo leh oo casri ah halka midabbada madow ay fududahay in lala jaanqaado kudhowaad midab kasta.
Musqusha Qulqulka Musqusha Ahama ahama
Sida caanku yahay birta birta ah waxay ku jirtaa jikada, hadda waa ikhtiyaar guud oo loogu talagalay qasabadaha musqusha sidoo kale. Waxay inta badan u egtahay nikkel caday laakiin inbadan oo buluug ah hoostiisa, iyo in yar oo dhalaalaya ah.
Waxyaabaha Saameynta Ku Yeelanaya Xulashadaada Waxyaabaha Dhamaadka Qasabadda
Midkee qaababkan dhammaadka ah ayaa xulashada saxda ah ee qasabadda musqusha? Tixgeli qodobadan.
Si cad, waxaad dooneysaa musqushaada inay lahaato isku xirnaan, muuqaal qurxoon oo qurux badan. Dhamaadka qasabadaha kaladuwan ayaa dhameystiraya qaababka iyo midabada kala duwan, markaa dooro midka ugu habboon qaabkaaga.
Dhammaadka qaar ayaa ka fudud in la ilaaliyo marka loo eego kuwa kale, mid walbana wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa. Dhameystirka Glossier wuxuu muujinayaa dhibco iyo faro ka fudud si ka fudud sida ay u sameeyaan maaddada iyo satin dhammeynta, laakiin sidoo kale way sahlan yihiin in la nadiifiyo. Culeys saar mudnaantaada inta aad dooranaysid qasabadda qasabadda.
Si loo gaadho qaabkaas wadajirka ah musqusha oo dhan, dad badan ayaa doonaya inay isbarbar dhigaan qasabadaha ay wataan qalabka kale ee qolka, sida muraayadooda, qalabka miiska saaran, iyo qaybaha kale. Caan ka noqoshada dhammaystirka qasabadu waa, sida ugu fudud ee tan loo samayn doono.
Doorashada Qolka Musqusha
Si cad, waxaa jira waxyaabo badan oo galaya xulashada qasabadda musqusha ee soo socota. Waa arrin ah fahamka moodooyinka iyo xulashooyinka kala duwan, go'aaminta kuwa la heli karo iyada oo ku saleysan musqushaada iyo wax aan waxba tarayn, iyo helitaanka ku habboon dhammaan baahiyahaaga iyo yoolalkaaga. Caawinaad dheeri ah iyo fikradaha qasabada ugu sareysa, kafiiri tilmaamaheena iibsiga qasabada tubada dheeriga ah.
Talooyinka taxanaha qasabada musqusha ee laxiriira
Hore:: Sida loo Nadiifiyo Qalabka Matxafka Musqusha ee Matta Next: Sida loo Nadiifiyo Matte Qasacadaha Madbakha Madoow
2021 / 05 / 13 1071
2021 / 05 / 09 785
2021 / 02 / 04 748
2021 / 02 / 03 781
2021 / 02 / 03 875